Prodécid : miainga eny amin’ny kaominina ny fampandrosoana ifotony | NewsMada
Prodécid : miainga eny amin’ny kaominina ny fampandrosoana ifotony
Ao anatin’ny fanatanterahana ny tetikasa hampanjary ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony ny Prodécid na ny Projet de développement communal inclusive et de décentralisation amin’izao fotoana izao. Faritra telo ny iasan’ny tetikasa ahitana an’i Diana, Analamanga, Boeny, ary misy kaominina 83 ny hisitraka izany.
Nahazo fiofanana manokana amin’ny fikirakirana ny vaovao momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony ny mpanao gazety miisa 38, izay avy aty Antananarivo, nampian’ireo avy any amin’ny faritra Diana. Naharitra herinandro ny fiofanana ary nisy ny fidinana ifotony tany amin’ireo kaominina voakasiky ny tetikasa toa ny kaominina Joffre Ville sy ny kaominina Antanamitarana.
Mpisehatra mivantana amin’ny fampandrosoana mivantana ny mpitondra fanjakana, ny tsy miankina, ny firahamonina, ny mpanao gazety. Izany indrindra no nampandraisana anjara ny mpanao gazety amin’ny fampitana ny vaovao avy amin’ireo voakasika mivantana. Ny mpanao gazety izay manana anjara asa amin’ny fikaroham-baovao, fanabeazana, fampandraisana andraikitra sns.
Anisan’ny zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ifotony sy ny fitsinjaram-pahefana ny fampidiran-ketra, ka andraisan’ny mponina anjara, ny fitantanana mangarahara. Anisan’izany koa ny fandriampahalemana, izay mampiroborobo ny fandrosoana ara-toekarena ary mety hampisongadina ny faritra.
Mifantoka amin’ireo rehetra ireo ny tetikasa Prodécid amin’ny ankapobeny, izay ny fiaraha-miasa alemà amin’ny alalan’ny GIZ no manatanteraka azy. Mpiara-miasa maro miasa eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana ifotony ary ny fitsinjaram-pahefana miara-misalahy amin’izany, kanefa miara-misahalahy amin’ny fanjakana koa, satria ny fitondram-panjakana no tompon’ny tetikasa amin’ny alalan’ny politikam-panjakana.
Kaominina Joffre Ville
Mampanjary ny fitantanana mangarahara ampandrosoana ifotony
Anisan’ny nisitraka ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony ny kaominina Joffre Ville any amin’ny distrika Antsiranana II. Anisan’ireo kaominina filamatra amin’ny fitantanana mangaraharaha ny any an-toerana. “Tsirin-kevitra ny zava-dehibe amin’ny fampandrosoana, mihaino ny olona ary mampahalalana ny fomba fitantanana amin’izy ireo”, hoy ny ben’ny Tanànan’i Joffre Ville, Miadana Seraphin. Anisan’ny olan’ny kaominina na izany aza ny tsy fahazaran’ny mponina nandoa hetra kanefa nohazavaina sy noresena lahatra izy ireo amin’ny pitsopitsony sy ny fomba fitantanana ny volany. Ny kaominina rahateo nahay nampiasa ny fitaovan-tserasera eo am-pelatanany nentina nampahalalana ny vaovao sy ny fomba fiasa eo amin’ny kaominina, ary nanamora ny fifandraisana eo amin’ny kaominina sy ny vahoakany. Mandray anjara, madoa hetra, manamboatra lalana, manadio ny rehetra. Tsy nisy ny fanilihana ny misehatra rehetra nahafahana mampandroso ny kaominina.
Eo ihany koa ny fisian’ny famatsian-jiro “éolienne” sy “panneau solaire” any Joffre Ville. Mamatsy jiro ny kaominina izy io, ary am-perinasa ny fanatsarana azy io ny ben’ny Tanàna sy ny mpiara-miasa aminy.
Parc National Montagne d’Ambre, miara-miasa amin’ny kaominina
Mampiavaka ity kaominina ity ihany koa ny fisian’ny Parc National Montagne D’Ambre. Maro ny mpitsidika azy, indrindra fa ny teratany vahiny izay mampidi-bola ho an’ny Parc. Voalaza anefa fa tsy misy vola miditra ho an’ny kaominina Joffre Ville mivantana izy io. Kanefa nambaran’ny talen’ny MNP (Madagascar national Parc) any an-toerana, Venty Odile, mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny kaominina ny Parc, ary misy kaominina 12 anatin’izany. Nampitomboina ny velaran’ny faritry ny Parc amin’izao fotoana izao izay mahatratra 30.000 ha. Ny volan’ny MNP ihany no mampihodina ny fitantanana azy, anomezana ny karaman’ny mpiasa, ny fokonolona amin’ny kaominina mandray anjara amin’ny fitantanana sy ny fiarovana ny faritra.
Olana atrehin’ny Parc ny fisian’ny fanapahana hazo tsy ara-dalàna amin’ny faritra sasany, ny fambolena katy ataon’ny olona mivelona amin’izany. Misy ihany koa ireo olona mipetraka anatin’ny faritry ny valanjavaboahary, kanefa tsy esorina izy ireo satria tsy manimba ny ala. Tsy mbola nisy ihany koa ny biby nivoaka tao amin’ity valanjavaboahary ity hatramin’izao, noho ny fiaraha-miasan’ny rehetra, ny kaominina, ny fokonolona sns.
Antanamitarana : Ben’ny Tanana vehivavy mampandroso ny kaominina
Miavaka ihany koa ny kaominina Antanamitarana, izay kaominina filamatra any amin’ny faritra Diana. “Mamelon-tena ny kaominina, ary ny vola azo amin’ny alalan’ny hetra sy ny fandraisana anjaran’ny mponina no anefana ny karaman’ny mpiasan’ny kaominina sy ny tamberin’andraikitra”, hoy ny ben’ny Tanànan’Antanamitarana, Amina. Voalazany ihany koa fa manana ny tetika fampandrosoana ny fokontany (PDF) ny kaominina, ka manampy betsaka amin’ny fampandraisana andraikitra ny vahoaka. Misy ny fanampiana ny vehivavy marefo toy ny fampianarana zaitra, ny fikarakarana tokantrano.
Manamafy ny fitantanana mangarahara ihany koa ny kaominina, ary anisan’ny mampazoto ny mpandoa hetra ao aminy izany. Misy ny atao hoe tsen-ketra ataon’ny kaominina rehefa asabotsy tsena.
Mihaino sy mitafa mivantana amin’ny vahoakany ihany koa ny ben’ny Tanàna, toy ny tao amin’ny fokontany Ambodimanary. Nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra nierana tamin’ny vahoaka tamin’ny fitantanana ny Bonga (Montagne des Français) tamin’izany. Ny mponina rahateo anisan’ny mpisehatra amin’ny fiarovana ny tanànany tamin’izany, ka nandray anjara mavitrika amin’ny adihevitra hatramin’ny fanapahan-kevitra ireo.
Endriky ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony avokoa ireo rehetra ireo. Mampandroso ny kaominina, ary mipaka mivantana amin’ny vahoaka, mandrisika azy ireo handray anjara amin’ny fampandrosoana, toy ny fandoavan-ketra.
Fanadihadiana: Yves Samoelijaona